Madaxweynaha Somaliya oo ka hadlay dagaalka uu dhiigga badani ku daatay ee ka dhacay Halgan | Baydhabo Online
Madaxweynaha Somaliya oo ka hadlay dagaalka uu dhiigga badani ku daatay ee ka dhacay Halgan
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa waxaa uu ka hadlay dagaalka uu dhiigga badani ku daatay ee Khamiistii ka dhacay Deegaanka Halgan ee Gobolka Hiiraan.
Madaxweynaha, ayaa ku faanay in dagaalkan jab wayn lagu gaarsiiyay mintidiinta Ururka Al Shabaab, isagoona bogaadiyay Ciidamada Dowladda Somaliya iyo kuwa Itoobiya, ee qaybta ka ah Amisom.
“Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Federaalka Somaliya, waxaan si diiran u soo dhaweynaya guusha ballaaran ee ay soo hoyeen ciidankeena iyo kuwa Itoobiya, oo cashar lama ilaaban ah u dhigay cadowga.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Madaxweynaha, ayaa khasaaraha uu sheegay in dagaalkan lagu gaarsiiyay Ururka Al Shabaab uu muujinayo in la’iska celin karo argagaxiso, jabna la gaarsiin karo.
“Jabkani xoogan ee Al Shabaab loo gaystay waxaa uu muujinaya in argagaxisada la iska dhicin karo, loona gaysan karo dhirbaaxo ka kulul kan hadda loo gaystay.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo soo saaray War Saxaafadeed, ayaa ku hanjabay in uu sii soconayo dagaalka ka dhanka ah mintidiinta, goor dhowna laga sifayn doono goobaha ay dalka ka jooggaan.
“Dagaalka lagula jiro Al Shabaab wuu sii socon doonnaa. Goobo badan ayaa lagu jebiyay, meelaha kooban ee ay ku harsan yihiina goor dhow ayaa laga sifayn doonnaa.” Ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
Madaxweyne Xasan, ayaa intaa ku daray “Waxan sidoo kale u hambalyeynaya shacabka Somaliyeed oo mar walba garab taagan dadaalka ciidanka geesiyaasha Somaliyeed iyo kuwa Amisom, ee inaga caawinaya dagaalka lagula jiro argagaxisada.”
Dagaalkan, ayaa sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh oo dhinacyadii dagaalamay ah, inkastoo aanay jirin cid si sax ah u xaqiijin karta in uu khasaaruhu gaarsiisan yahay, marka laga soo taggo warar is burinaya, oo dagaalka ay ka soo saareen dhinacyadii uu dhex maray.